အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ပဲပြားပေါင်းနှင့် မြေထဲပင်လယ်အသုပ်များ
29 Responses to “ပဲပြားပေါင်းနှင့် မြေထဲပင်လယ်အသုပ်များ”
ကောင်းလေစွ... သွားရည်များများကျသွားပါ၏...း)))
ချောရေ တိုဟူးဖြူပေါင်းကို ဒီကနေ့စမ်းလုပ်မယ်။ ကညွတ်ကိုတော့ အိမ်မှာကြော်စားတာလောက်ပဲ လုပ်စားဖူးတာဆိုတော့ ဒီတစ်ခါ သုတ်စားကြည့်မယ်။
တူရကီသခွားသီး ငရုပ်သီးသုပ်လည်း လုပ်ရတာလွယ်တော့ စမ်းသုပ်မယ်။ ကျေးဇူးနော်။
ဆလတ်သုပ်တွေကို ကြိုက်တယ် ...သံလွင်ဆီထည့်သုပ်ရတာမျိုးကြိုက်တယ်...။ အိမ်မှာလုပ်စားဦးမယ် ချောရယ်....။
ဒီနေ့ ဟင်းလေးတွေ က အတော်ကောင်းမယ်ထင်တယ် တခု မှ အဲလိုလုပ် မစားဘူးသေးဖူး
တို့ဟူးဖြူပေါင်းလေး စားချင်လိုက်တာ။ တမျိုးပြီးတမျိုးချက်ကျွေးတာ မေတ္တာနဲ့တင် ပြည့်နေပါပြီနော်မချော။။
တို့ ဖူးဖြူပေါင်းကို စားချင်ဆုံးပဲ..
ကညွတ်ဆိုတာ ခုမှပဲ ကြားဖူးတာ။ ဘုဉ်းပေးကြည့်ချင်လိုက်ပါဘိ ချောရေ။ ပဲပြားကိုတော့ သူ့သီးသန့် ကြော်ချက်နဲ့ ပဲပင်ပေါက်နဲ့ ရောချက်ထားတာပဲ စားဖူးသေးတယ်။ ချောနဲ့တွေ့မှပဲ ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ ဘုဉ်းပေးဖူးသွားပြီ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ မချောရေ။
Oh, though I haven;t tasted any of these two salad, I am already in love those, thank you Chaw !!!
မချောရေ..အလုပ်တစ်ဖက် သမီးတစ်ဖက်နဲ့ အမြဲတမ်းမအားတဲ့ကျမ..ပိတ်ရက်ကျတော့ လည်း သမီးအချိန်ပေးရ..ယောကျာင်္းစားချင်တာလုပ်ပေးရနဲ့ လုံးဝနီးပါးကို အချိန်မအားလပ်ပေမယ့် မချောဝက် ဆိုဒ်ရယ်..နောက်ထပ် ၂ခုရယ်က မ၀င်ဖြစ်ဝင်ဖြစ်အောင် နေ့တိုင်းကြိုးစာစ၀င်တယ်..ဟိုတလောက၀င်လို့မရလို့ အီးမေးနဲ့ဝင်တာလည်းမရနဲ့..မချောပြန်လာမှဝင်လို့ရတော့တယ်..အဆင်ပြေရင်နေ့တိုင်းရေးဖြစ်အောင်ကြိုးစာပေးပါ..ဗဟုသုတတွေ ရလို့ပါ..
စာအုပ်ထဲကနည်းကြည့်ပြီး စိတ်လက်ရှည်ရှည်နဲ့ ပြန်စမ်းချက်တတ်တဲ့ ချောကို ဘာလက်ဆောင်ပေးရမယ်ဆိုတာ သိသွားပြီ.....။ အရွက်သုတ်ဆို အကုန်ကြိုက်တယ်။ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ ချောရေ...:))
တိုဟူးဖြူကို တခါမှ မစားဖူးသေးဘူး၊ မချောရဲ့ presentation က လှတာနဲ့ သွားရည်ယိုသွားပြီ..၊ မြေထဲပင်လယ် သုပ်တွေက အခုလို နွေရာသီ ပူတဲ့အချိန်ဆို အရမ်းကောင်းမှာ သေချာတယ်၊ မချောကတော့ အမြဲပဲ ရှာရှာဖွေဖွေ စူးစမ်းနေတော့တာပဲ ထင်ပါရဲ့ဗျာ၊ ကိုယ်စမ်းကြည့်တာတွေကိုလည်း အခုလို ပြန်ပြီး ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါပဲ မချောရေ...။
ချောတို့ ဒေသမှာ ချက်တဲ့ဟင်းတွေက ဒီက တရုပ်ဟင်းတွေနဲ့ အတော်ဆင်တယ်နော်
ထုံးဘဲဥ ဆိုတာ .???
ဟို .. မြန်မာနိုင်ငံက
ခေါ်တာ ဆားဘဲဥလား .. ဆေးဘဲဥ လား ..
အဲ့ဒါလား .. မချော ..
ချော.. ဟင်းအရောင်တွေက သိပ်လှတယ်နော်။
တို့ဟူးဖြူဟင်းလေး လာငေးသွားတယ်။ ပြင်ထားတာလေးက ချစ်စရာလေး။ ရို့စ် ယူနီနဲ့ အလုပ်တွေပြန်ရှုပ်ပြီမို့ ဘလော့ဂ်ပိတ်ထားတယ်နော် အစ်မ။ စိတ်မပူပါရန်နှင့် သတိရနေမယ်း)
ဗိုက်ဆာနေတုန်း လာကြည့်မိတယ်။ တကယ်ကို စားချင်စိတ်ပေါက်သွားပြီ။ အားလုံး ခံတွင်းတွေ့မဲ့ အစားအစာတွေချည်းဘဲ။
ထူးထူးဆန်းဆန်း ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ အတွက် ချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ဗိုက်ဆာသွားတယ်။
အားလုံးကိုသဘောကျသွားပါတယ် ချောရေ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိတယ်။ အသုတ်တွေကလည်း စားချင်စရာ။
ထုံးဘဲဥ မစားဘူးဘူး။ မစားကိုမစားကြည့်တာ ခုတော့လှတာနဲ့ တင် စမ်းကြည့်ချင်နေပြီ။
စိတ်ပါလက်ပါကို ချက်ထားတာပဲ။ စားဖူးဖို့ ဝေးစွ ခုမှပဲ မြင်ဖူးတော့တယ်။
အစ်မချော ဘလော့ဂ်လေးကို လာတိုင်း စားစရာ အသစ်လေးတွေ တွေ့ တွေ့ နေရတယ်။ သားရည်တွေတောင်ကျတယ်။
အစ်မချော ကျွန်တော် ဘလက်ကော်ဖီပါ။ ခုညီရဲသစ်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတစ်ခု ဖန်တီးထားတယ်။ လာပြီး ညွှန်ကြားပြသပေးပါဦး...
မချောရေ.. နယူးယောက် မှာ မုန်တိုင်း တော့ စနေပြီ။ အင်တာနက် မပျက် ခင် မချော လက်ယာ တွေ သရေကျသွားတယ်. ပုံ တွေ မြင်တာ နဲ့ ဗိုက် က ပို စာ လာ တယ်...စားချင်လိုက်တာ.
(လေရော မိုးရော လာ နေပြီ. အဆင်ပြေ မှာ ပါ..)
စားစရာတွေက စိတ်ဝင်စားစရာတွေချည့်ပဲ။ အဲလိုလေး အဆင်သင့် လုပ်ပြီးသားလေး စားရရင်ပိုကောင်းမယ်း)
ကောင်းလိုက်တဲ့ အကျင့် ကိုယ်ဆို
ဆီစားလွန်းလို့ အရစ်တွေ ဘယ်နှစ်ထပ်မှန်းမသိဘူးး)
ဒါနဲ့ စိုးရိမ်ပေးတဲ့အတွက်ရော ဆုတောင်းပေးတဲ့ အတွက်ပါ ကျေးဇူးပါ ချွေးမလေးရေ
ကိုယ်တို့ မြို့လေးက ဘာမှမဖြစ်ဘူး
မချောရာ .. ဟင်းတွေကကောင်းလွန်းတယ်။
ကညွတ်ကို တစ်ခါတွေ့တာ ကညွတ်မှန်းမသိလို့ ချက်မစားလိုက်ရဘကညွတ်ပေါ်ချိန်ဆို မြေပဲပင်လယ်ဟင်းနည်းတွေနဲ့ချက်စားကြည့်ဦးမယ်။
အမှားပြင်ဆင်ချက်- မြေထဲပင်လယ် :)
pp- pg's ma ma
အစ်မ လုပ်နည်း ပြပေးသွားတာ ရှင်းနေတာပဲ။ ကြည့်ရတာလည်း ပသာဒဖြစ်စေတယ်။ တစ်ရက် လုပ်စမ်းကြည့်ဦးမယ်။ ခုတောင် စားချင်စိတ်တွေ အရမ်းပေါက်သွားပြီ။